Taariikhda astaanta Tesla | Hal-abuurka khadka tooska ah
Taariikhda astaanta Tesla
Shirkad kasta, sumad gaar ah, ganacsi... waxay leedahay calaamad qeexeysa. Tani waa inay isku daraysaa nuxurka waxaad samaynayso iyo waxaad rabto in kuwa kale ka fahmaan sumaddaada. Laakiin miyaad taqaanaa taariikhda astaanta Tesla?
Kahor intaadan weydiin, waa inaan dib u laabanaa dhowr sano, sababtoo ah in kasta oo hadda loo yaqaan nooca gawaarida korontada, Mareykanka waxay horey u shaqeynayeen 1900. Maxaa ku dhacay inay joojiyaan guusha? Maxay ka qabtaa Tesla?
1 Sheekada Tesla
2 Waa maxay macnaha T ee ku qoran summada Tesla?
3 Yaa sameeyay astaanta Tesla
4 Horumarka astaanta Tesla
5 Maxay calaamaddu noo sheegaysaa
Sida aad si fiican u ogtahay, Tesla waa astaanta baabuurta ee Elon Musk waxaana sameeyay 2003 Martin Eberhard iyo Mark Tarpenning. Si kastaba ha ahaatee, milkiilaha hadda waa Musk.
Testa waxaa loo magacaabay ka dib markii physicist iyo alifay Nikola Tesla.
Waana taas, haddii ay dhacdo inaadan garanaynin, calaamadda Tesla waa sidan oo kale sababtoo ah waa qayb ka mid ah gabal uu Tesla laftiisu hindisay, qayb ka mid ah mishiinka korontada, kaas oo uu abuuray in ka badan 125 sano ka hor.
Dhab ahaantii, 1901 baabuurta korantada ayaa horeba uga jiray Maraykanka, waana la isticmaalay. Tirakoobku wuxuu noo sheegay in 38% baabuurta Maraykanka ay ahaayeen koronto. Haddaba maxaa dhacay?
Hagaag, gawaadhida shidaalka ayaa yimi kuwaas oo aad uga jaban (ku dhawaad ​​saddex jeer in ka yar mid koronto ah) taas oo keentay in iibkii dambe aad hoos ugu dhaco, tanna, keentay inay joojiyaan wax soo saarkooda 1930kii.
Waxay ahayd ilaa 1990 kii in injineer koronto iyo horumariye kombuyuutar ay kulmeen oo bilaabeen inay soo saaraan, marka hore, akhristayaasha e-books, taas oo ahayd guul weyn. Laakiin ka dib, waxay u yimaadeen baabuurta korontada, aasaasay Tesla Motors ee 2003.
Iyo sidee buu Elon Musk u soo galayaa shirkadda? Iyada oo loo marayo maalgashi. Waana in Musk uu lacag ku maal galiyay shirkadiisa, isaga oo ka dhigayay inay bilaabato inay dhawaaqdo oo ay dib ugu celiso baabuurta korantada suuqa. Sidan ayay ahayd markii uu soo baxay gaadhigii ugu horeeyay ee Tesla, isla sanadkaas, kaas oo sumaddiisu ahayd T. Laakiin markii hore lama garanayn waxa uu u taagan yahay, waxaanay si fudud u arkayeen in uu yahay xarafka Tesla iyaga oo aan garanayn macnaha qarsoon. ayaa leh.
Waa maxay macnaha T ee ku qoran summada Tesla?
Sidaan horey kuugu sheegnay, T ee ku taal sumadda Tesla dhab ahaantii waa qayb ka mid ah qaybta isdhaafka ah ee mashiinka korantada ee Nikola Tesla uu ikhtiraacay.
Dhab ahaantii, gabalku waa wareegsan yahay, oo leh faashado badan, sida haddii ay tahay giraangiraha, iyo waxa ay sameeyeen waxay ka qaateen qayb ka mid ah taas oo u ekaatay calaamadda T.
Dhab ahaantii, waxaa la sheegay in abuurayaashu ay laftoodu adeegsadeen qorshayaasha Nikola Tesla ee mashiinka korantada si ay u sawiraan qayb u eg T oo ay go'aansadeen inay la shaqeeyaan ilaa ay ka gaaraan waxa aan hadda ku arki karno calaamadda.
Yaa sameeyay astaanta Tesla
Ka dib markaan ogaano taariikhda calaamadda Tesla, waa inaan ka hadalnaa abuurayaasha naqshadahan. Waxayna yihiin studio design RO Studio. Waxay la yimaadeen fikradda ah in ay ku biiraan astaanta lafteeda, Tesla, iyo sidoo kale mid ka mid ah hal-abuurka inta badan la xidhiidha baabuurta korontada, ee calaamadda.
Horumarka astaanta Tesla
Markii hore, nooca ugu horreeya ee astaanta Tesla wuxuu lahaa gaashaan ka dambeeya T. Xarfaha waxay ahaayeen madow halka gaashaanku uu ahaa lacag si uu u soo baxo. Si kastaba ha ahaatee, calaamadda noocan oo kale ah ma sii socon muddo dheer, sannado ka dib waxay go'aansadeen in ay bixiyaan gaashaanka, iyaga oo ka tagay dhammaan caannimada T lafteeda.
Xaaladaha qaarkood, calaamaddu kaliya maaha inay leedahay T, laakiin wax yar ka hooseeya (mararka qaarkood korka) ereyga Tesla ayaa la dhigayaa, xarfo waaweyn oo lagu kala saaro E iyo A (E waa saddex xabbo oo siman oo aan ku biirin iyo A ayaa leh sare. qayb ka madax banaan qaybta hoose.
Hadda, calaamadda waxaa lagu dhejin karaa midabyo kala duwan, gaar ahaan saddex: casaan, madow iyo qalin.
Maxay calaamaddu noo sheegaysaa
Marka calaamadda Tesla la arko, u-qalmitaanka sida raaxada, awoodda iyo xarrago ayaa jooga marka la qeexayo. Oo waxay tahay in qaar badan ay u tahay calaamad heer sare ah, taas oo ah, qaali, oo aan suurtagal ahayn qof kasta. Waxaan dhihi karnaa waa calaamad sybaritic ah oo kaliya in yar ayaa awoodi kara qiimaha baabuurta.
Laakiin shaki kuma jiro in ay sidoo kale soo rogayso tayada iyo kalsoonida. Inkasta oo ay qaali yihiin, baabuurtu waa kuwo la isku halleyn karo oo xitaa furay mustaqbalka socodka korontada.
Sidaa darteed, calaamaddu waxay caddaynaysaa xaqiiqda ah in qof haysta baabuur Tesla uu yahay qof heer sare ah (kaas oo awood u leh gaariga iyo wax kasta oo la socda).
Hadda oo aad ogtahay waxa taariikhda calaamadda Tesla ay tahay, hubaal markaad aragto waxa ugu horreeya ee maskaxdaada ku soo dhacaya waxay noqon doontaa inaad aragto waxa gabal dhamaystiran oo ay ka soo qaateen calaamad u gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Taariikhda astaanta Tesla
Summada gaarka ah: tusaale